ယူနိုက်တက်ဟာ ဘာ့ကြောင့် ချန်ပီယံ မဖြစ်နိုင်တာလဲ ၊ လက်ရှိ ကစားသမား စုဖွဲ့မှု အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ #အာဆင်ဝင်းဂါး - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက်ဟာ ဘာ့ကြောင့် ချန်ပီယံ မဖြစ်နိုင်တာလဲ ၊ လက်ရှိ ကစားသမား စုဖွဲ့မှု အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ #အာဆင်ဝင်းဂါး
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ လက်ရှိ အချိန် တိုက်စစ် ပိုင်းမှာ လူငယ် ကစားသမား သုံးဦး ကို ထားပြီး ကစား နေခဲ့သလို အရံ အင်အားစု မှာလည်း လူငယ် ကစားသမား လေးတွေ ကိုပဲ ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက် ဟာ နွေ အပြောင်း အရွှေ့ တုန်းက လည်း ဒန်နီယယ် ဂျိမ်းစ် နဲ့ အာရွန် ဝမ် ဘစ်ဆာကာ တို့လို အတွေ့ အကြုံ နည်းပါး လှတဲ့ လူငယ် ကစားသမား လေးတွေ ကိုပဲ ခေါ်ယူ အင်အား ဖြည့်တင်း ထားခဲ့ ပါတယ် ။
လက်ရှိ ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ ခံစစ် ပိုင်းနဲ့ ဂိုးသမား နေရာ ကသာ အတွေ့ အကြုံ ရင့်ကျက် သူတွေ များပြား ပြီး လက်ကျန် နေရာ တွေ မှာတော့ ဆု ဖလား တွေကို ဆွတ်ခူး နိုင်ရေး အတွက် ယုံကြည် စိတ်ချ ရတဲ့ အစု အဖွဲ့ တစ်ခု ရှိ မနေ ခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါ့ကြောင့် အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် နည်းပြ ကြီး အာဆင်ဝင်းဂါး က လက်ရှိ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ကစားသမား စုဖွဲ့ မှု ဟာ လုံလောက်စွာ ရင့်ကျက် မှု မရှိ သေးကြောင်း ၊ ဒါ့ကြောင့် ဒီ အစုအဖွဲ့ ဟာ အသင်း ကို အောင်မြင် မှု ရရှိ စေ နိုင်မှာ မဟုတ် သေးကြောင်း သုံးသပ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အကယ်လို့ ခင်ဗျား ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို ကြည့် လိုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့ ဆီမှာ အလား အလာ ကောင်းတဲ့ ကစားသမား တွေ အများကြီး ရှိ နေတယ် ဆိုတာ ကို မြင်တွေ့ ရပါ လိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ တွေဟာ စုဖွဲ့ ကစား နိုင်မှု ပုံစံ တစ်ခု ကိုတော့ မပိုင်ဆိုင် ထားကြ ပါဘူး ”
” ဒါဟာ လက်ရှိ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ကစား သမား တွေ လုံလောက် တဲ့ ရင့်ကျက် မှုတွေ မရှိ သေးလို့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ် ။ သူတို့ တွေဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လို အသင်း တစ်ခု ကို အစု အဖွဲ့ နဲ့ အတူ တကွ ကစား စေနိုင် တဲ့ အသင်း မဖြစ် စေနိုင် သေးကြ ပါဘူး ”
” အဲ့တာ က လက်ရှိ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပတ်သက် လို့ ကြီးမား တဲ့ မေးခွန်း ထုတ် စရာ တစ်ခု ပါပဲ ။ လက်ရှိ အစု အဖွဲ အရ သူတို့ တွေ ဆီက တစ်စုံ တစ်ခု ရလာ နိုင်မယ် လို့ ကျွန်တော် တို့ ခံစား သိရှိ နိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာ တွေက အဆင်သင့် မဖြစ်သေး ပါဘူး ”
” အဲ့တာ ကြောင့်လည်း သူတို့ ကစား နေတာ ကို ကြည့်ရ ခြင်းက သူတို့ တွေဟာ ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင် ဖို့ တိုက်ပွဲ ဝင်နိုင် လောက်တဲ့ အထိ အနေအထား ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားခြင်း မရှိ ကြ သေးဘူး လို့ ကျွန်တော် ပြောနေ ခဲ့ရ တာပါ ”
” သူတို့ တွေဟာ ရိုင်ယန် ဂစ် ၊ ပေါလ် စခိုးလ် နဲ့ ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း တို့ နှစ်ပေါင်း များစွာ လုပ်ပြ ထားနိုင် ခဲ့ကြ သလို မျိုး လုပ်ဆောင် ပြနိုင် ကြ မလား ? ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ပြောရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဟာ အဲ့တာ အပေါ် ယုံကြည် မှု မရှိ ပါဘူး ” လို့ အာဆင်ဝင်းဂါး က သုံးသပ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုကျတကျဟာ ဘာ့ကွောငျ့ ခနျြပီယံ မဖွဈနိုငျတာလဲ ၊ လကျရှိ ကစားသမား စုဖှဲ့မှု အပျေါ မှတျခကျြပေးလိုကျတဲ့ #အာဆငျဝငျးဂါး
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ လကျရှိ အခြိနျ တိုကျစဈ ပိုငျးမှာ လူငယျ ကစားသမား သုံးဦး ကို ထားပွီး ကစား နခေဲ့သလို အရံ အငျအားစု မှာလညျး လူငယျ ကစားသမား လေးတှေ ကိုပဲ ပိုငျဆိုငျ ထားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ယူနိုကျတကျ ဟာ နှေ အပွောငျး အရှေ့ တုနျးက လညျး ဒနျနီယယျ ဂြိမျးဈ နဲ့ အာရှနျ ဝမျ ဘဈဆာကာ တို့လို အတှေ့ အကွုံ နညျးပါး လှတဲ့ လူငယျ ကစားသမား လေးတှေ ကိုပဲ ချေါယူ အငျအား ဖွညျ့တငျး ထားခဲ့ ပါတယျ ။
လကျရှိ ယူနိုကျတကျ အသငျး မှာ ခံစဈ ပိုငျးနဲ့ ဂိုးသမား နရော ကသာ အတှေ့ အကွုံ ရငျ့ကကျြ သူတှေ မြားပွား ပွီး လကျကနျြ နရော တှေ မှာတော့ ဆု ဖလား တှကေို ဆှတျခူး နိုငျရေး အတှကျ ယုံကွညျ စိတျခြ ရတဲ့ အစု အဖှဲ့ တဈခု ရှိ မနေ ခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါ့ကွောငျ့ အာဆငျနယျ အသငျး ရဲ့ ဂန်ဓဝငျ နညျးပွ ကွီး အာဆငျဝငျးဂါး က လကျရှိ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ကစားသမား စုဖှဲ့ မှု ဟာ လုံလောကျစှာ ရငျ့ကကျြ မှု မရှိ သေးကွောငျး ၊ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီ အစုအဖှဲ့ ဟာ အသငျး ကို အောငျမွငျ မှု ရရှိ စေ နိုငျမှာ မဟုတျ သေးကွောငျး သုံးသပျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” အကယျလို့ ခငျဗြား ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ကို ကွညျ့ လိုကျမယျ ဆိုရငျ သူတို့ ဆီမှာ အလား အလာ ကောငျးတဲ့ ကစားသမား တှေ အမြားကွီး ရှိ နတေယျ ဆိုတာ ကို မွငျတှေ့ ရပါ လိမျ့မယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ တှဟော စုဖှဲ့ ကစား နိုငျမှု ပုံစံ တဈခု ကိုတော့ မပိုငျဆိုငျ ထားကွ ပါဘူး ”
” ဒါဟာ လကျရှိ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးရဲ့ ကစား သမား တှေ လုံလောကျ တဲ့ ရငျ့ကကျြ မှုတှေ မရှိ သေးလို့ ဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျ ပါတယျ ။ သူတို့ တှဟော မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ လို အသငျး တဈခု ကို အစု အဖှဲ့ နဲ့ အတူ တကှ ကစား စနေိုငျ တဲ့ အသငျး မဖွဈ စနေိုငျ သေးကွ ပါဘူး ”
” အဲ့တာ က လကျရှိ ယူနိုကျတကျ နဲ့ ပတျသကျ လို့ ကွီးမား တဲ့ မေးခှနျး ထုတျ စရာ တဈခု ပါပဲ ။ လကျရှိ အစု အဖှဲ အရ သူတို့ တှေ ဆီက တဈစုံ တဈခု ရလာ နိုငျမယျ လို့ ကြှနျတျော တို့ ခံစား သိရှိ နိုငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့တာ တှကေ အဆငျသငျ့ မဖွဈသေး ပါဘူး ”
” အဲ့တာ ကွောငျ့လညျး သူတို့ ကစား နတော ကို ကွညျ့ရ ခွငျးက သူတို့ တှဟော ခနျြပီယံ ဖွဈနိုငျ ဖို့ တိုကျပှဲ ဝငျနိုငျ လောကျတဲ့ အထိ အနအေထား ကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျ ထားခွငျး မရှိ ကွ သေးဘူး လို့ ကြှနျတျော ပွောနေ ခဲ့ရ တာပါ ”
” သူတို့ တှဟော ရိုငျယနျ ဂဈ ၊ ပေါလျ စခိုးလျ နဲ့ ဒေးဗဈ ဘကျခမျး တို့ နှဈပေါငျး မြားစှာ လုပျပွ ထားနိုငျ ခဲ့ကွ သလို မြိုး လုပျဆောငျ ပွနိုငျ ကွ မလား ? ပုဂ်ဂိုလျရေး အရ ပွောရမယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျော ဟာ အဲ့တာ အပျေါ ယုံကွညျ မှု မရှိ ပါဘူး ” လို့ အာဆငျဝငျးဂါး က သုံးသပျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။